I-China Resin plugging hole I-Microvia yokuntywila isilivere ye-HDI kunye nabenzi bokugrumba i-laser kunye nabathengisi | Kangna
Umngxuma wokufaka umngxunya kwi-HDI yesilivere yokuntywila ngesilivere
Uhlobo lwezinto: FR4
Ulwaleko lobeko: 4
Min umkhondo ububanzi / indawo: 4 mil
Min ubungakanani umngxuma: 0.10mm
Kugqityiwe ubukhulu bebhodi: 1.60mm
Umbala we-Solder mask: luhlaza okwesibhakabhaka
Ixesha Lead: iintsuku ezili-15
Ukusukela kwinkulungwane yama-20 ukuya ekuqaleni kwenkulungwane yama-21, ibhodi yesekethe ishishini elektroniki lithatha ixesha lokukhula ngokukhawuleza kwetekhnoloji, itekhnoloji ye-elektroniki iye yaphuculwa ngokukhawuleza. Njengomzi-mveliso oshicilelweyo webhodi yesekethe, kuphela ngophuhliso lwayo, inokuhlala ihlangabezana neemfuno zabathengi. Ngomthamo omncinci, okhanyayo kunye nobhityileyo weemveliso ze-elektroniki, ibhodi yesekethe eprintiweyo iphuhlise ibhodi eguqukayo, ibhodi eguqukayo eqinileyo, ibhodi yesekethe engaboniyo engcwatyelweyo njalo njalo.
Ukuthetha ngemingxunya engaboniyo / engcwatyelweyo, siqala ngemultilayer yendabuko. Ubume bebhodi yesekethe eyahlukeneyo enemigangatho emininzi yenziwe yisekethe yangaphakathi kunye nesekethe engaphandle, kwaye inkqubo yokomba kunye nokwenza isinyithi emngxunyeni isetyenziselwa ukufezekisa umsebenzi wonxibelelwano lwangaphakathi lwesekethe nganye yomaleko. Nangona kunjalo, ngenxa yokwanda koxinzelelo lwelayini, indlela yokupakisha yeendawo zihlaziywa rhoqo. Ukwenza indawo yebhodi yesekethe inikwe umda kwaye ivumele indawo yokusebenza nangaphezulu, ukongeza kububanzi bomgca obuncinci, ukuvula kuye kwancitshiswa ukusuka kwi-1 mm ye-DIP jack ukuvula ukuya kwi-0.6 mm ye-SMD, kwaye kwehliswa ngakumbi ukuya ngaphantsi 0.4mm. Nangona kunjalo, umphezulu womhlaba uya kuhlala nabantu, ke kungcwatywa umngxunya kunye nomngxunya ongaboniyo. Inkcazo yomngxunya wokungcwatywa kunye nomngxunya ongaboniyo ngolu hlobo lulandelayo:
Umngxuma ophakathi komaleko ongaphakathi, emva kokucinezelwa, awunakubonwa, ngoko ke akufuneki ukuba ungene kwindawo engaphandle, amacala aphezulu nasezantsi emngxuma akwisangqa sebhodi, ngamanye amagama, angcwatyelwe Ibhodi
Isetyenziselwa unxibelelwano phakathi komaleko womphezulu kunye nolunye okanye nangaphezulu umaleko wangaphakathi. Icala elinye lomngxuma likwelinye icala lebhodi, emva koko umngxunya uqhagamshelwe ngaphakathi ebhodini.
Uncedo lwebhodi yomngxunya ongaboniyo nengcwatyelwe:
Kwiteknoloji engagqobhoziyo umngxunya, ukusetyenziswa komngxunya ongaboniyo kunye nomngxunya ongcwatyelweyo kunokunciphisa kakhulu ubungakanani bePCB, ukunciphisa inani lemiqolo, ukuphucula ukuhambelana kombane, ukunyusa iimpawu zeemveliso zombane, ukunciphisa iindleko, kunye nokwenza uyilo sebenza ngokulula ngakumbi nangokukhawuleza. Kuyilo lwe-PCB yemveli kunye nokusebenza, ukugqobhoza kungadala iingxaki ezininzi. Okokuqala, bahlala kwindawo enkulu efanelekileyo. Okwesibini, inani elikhulu lokungena kwimingxunya kwindawo eshinyeneyo likwabangela imiqobo emikhulu ekubambeni ungqimba lwangaphakathi lwePCB eyahlukeneyo. Ezi mingxuma zihamba kwisithuba esifunekayo sokufakelwa kweentambo, kwaye zidlula ngokungaphezulu kumbane wonikezelo lwamandla kunye nocingo lwentambo yomhlaba, eya kuthi itshabalalise impedance yeempawu zonikezelo lwamandla ombane womhlaba kwaye ibangele ukusilela kombane emhlabeni Uluhlu. Kwaye ukubhola okuqhelekileyo koomatshini kuya kuba ngamaxesha angama-20 ngokusetyenziswa kwetekhnoloji yomngxunya ongagungqiyo.
Egqithileyo Ulawulo lwe-6 lwe-impedance yolawulo oluqinileyo-lwebhodi ene-stiffener
Okulandelayo: I-3 oz solder mask efaka i-ENEPIG kwibhodi yobhedu enzima